Maxaad Ka Taqaan 10-ka Qoys Boqortooyo Ee Ugu Hantida Badan Caalamka - Daryeel Magazine
Khubarada Iyo Warbaahinta kala duwan ee arrimaha dhaqaalaha dunida ka faaloota ayaa baahiyay, toban qoys oo ka mid ah boqortooyooyinka dunida, oo ay ku tilmaameen kuwa ugu dhaqaalaha badan dunida, gaar ahaana sanadkaan 2015, tobankan qoys boqortooyo, ayaa isugu jira, Carab, Reer Yurub iyo Eeshiya.
Qiyaasta qoys walba hantidiisa lacageed gaarsiisan tahay ayaa lagu cadeeyay warbixintan loogu magaca daray, tobanka qoys boqortooyo ee ugu hantida badan dunida, hasa yeeshee lama sheegin lacagtaasi sifaha ay ku soo gashay, waxaana faaladeeda loo dhaafay dadwaynuhu inay falanqeeyaan.
Kaalinta Koowaad Boqorada Ingiriiska Elizabeth II
Qoyska Boqortooyada Ingiriiska ayaa iyagu noqday kuwa ugu hantida badan dunida, dhaqaalaha qoyskani haysto oo dhan lixdan bilyanoo dollar ama lixdan kun oo milyan dollar, waxa loo nisbeeyaa ama ku qoran boqorada dalkaas, Elizabeth II.
Boqorada Ingiriiska oo imika sagaal iyo sideetan jir ah, ayaa noqotay qofkii ugu xukunka dheeraa ee taajka boqornimada dalkaas qabta.
Boqorka Bahrian iyo Qoyskiisa
Qoyska boqortooyada dalka Bahrain ee gacanka carbeed ku yaala oo lagu tilmaamo ka ugu taariikhda dheer, marka laga hadlayo muddada uu dalkaas xukumayay, ayaa noqday qoyska labaad ee ugu hantida badan guud ahaan boqortooyoyinka dunida.
Sida warbixintani sheegtay boqorka dalkaas, Xamad Bin Ciisa Aala Khaliifa, ayaa hantidiisa lagu qiyaasay ilaa sodon bilyan oo dollar, taas oo kala badh ka noqonaysa qiyaasta hantiyeed ee boqorada Ingiriiska Elizabeth II haysato.
Xaakimka Imaarada Abu Dhabi
Qoyska imaarada Abu Dhabi ee dalka Isu Taga Imaaratka Carbeed ayaa kaalinta sadexaad kaga jira, qoysaska ugu hantida badan dunida, Madaxweynaha UAE, Sheekh Khalifa Bin Sayid Aala Nahyan, oo sidoo kale ah, xaakimka imaarada Abu Dhabi ayaa sida qiimayntan lagu sheegay, hantidiisu gaadhaysaa ilaa sodon bilyan oo dollar, waxaanu dhawr boqol oo milyan ka hanti yar yahay, boqorka dalka Bahrain.
Boqorka Thailand Iyo Qoyskiisa
Boqorka gabowga iyo xanuuno isugu biiray muddo dhawr sanadood ah ugu jira cusbtaal ku yaala dalkiisa, ayaa noqday qofka afraad ee ugu hantida badan dunida, waxaana boqor Bhumibol Adulyadej, oo xaaladiisa caafimaad aad u liidato, la sheegay in uu hasto shan iyo labaatan bilyan oo dollar.
In kasta oo dalka Thailand ka mid yahay waddamada ugu saboolsan dunida, isla markaana shacbiga ku nool uu ugu nolosha liito dunida, haddana waxa uu boqor Bhumibol Adulyadej iyo qoyskiisu ku nool yihiin badhaadhaha nololeed ee ugu sareeya dunida, kaas oo ilaa heer ay lacag haddii muwaadiniinta dalkaas loo qaybiyo qof qof u gaadhaysa ay ka dhaqdeen.
Xaakimka Imaarada Dubai
Xaakimka Imaarada Dubai ahna madaxweyne ku xigeenka dalka Isu Taga Imaaratka Carabta, Sheekh Maxamed Bin Raashid Aala Maktuub ayaa isagu kaalinta shanaad kaga jira liiska qoysaska ugu hantida badan dunida, waxaana hantida uu hastaa dhan tahay shan iyo labaatan bilyan oo dollar.
Dalka Isu taga imaaratka carabta ayaa liiska qoysaska ugu hantida badan dunida labo kaalmood kaga jira, haddii hantida labada xaakim ee Imaaradaha Dubai iyo Abu Dhabi La isku daro ay ku dhawaanaysaa hantida boqorada Ingiriisku leedahay.
Boqorka Kuwait Iyo Qoyskiisa
Boqorka dalka Kuwait Sheekh Sabaax Al Axmed Al Jaabiri iyo qoyskiisa ayaa kaalinta lixaad iyaguna ka soo galay, hantiilayaasha ugu horeeya ee dunida, in kasta oo aanay qoys boqortooyo ka jirin dalka Kuwait, haddana waxa uu boqor Sheekh Sabax Al Axmed Al Jaabiri hantiidiisa lagu qiyaasay sagaal bilyan oo dollar.
Suldan Qaabus Bin Sacidka Cumaan
Suldaan Qaabuuska dalka Cumaan ayaa isagu kaalinta todobaad ka galay liiska qoysaska boqortooyooyinka dunida ugu hantida badan, waxaana hantidiisu dhan tahay lix bilyan iyo shan boqol oo milyan.
In kasta oo Cuman ka mid tahay waddamada ugu hodansan dunida, dadkooduna ugu nolosha fiican yihiin, haddana waxa la cadeeyay in lacag badan uu haysto suldaanka dalkaas 45-sanadood ka talinayay, kaas oo aan carruur lahayn sida laga soo wariyay.
Qoyska boqortooyada Netherland Ama Holland
Qoyska boqortooyada dalka Netherland oo dhawaan ay iska dhaxleen wiilkii dhaxalka lahaa iyo hooyadii, waxa uu ka mid yahay kuwa ugu hantida badan dunida, waxaanu qoyskaasi soo labeeyaa qoyska boqortooyada boqorada Ingiriiska ee guud ahaan qaarada Yurub.
King Willem-Alexander oo sanadkii 2013-kii hooyadii taajka boqortooyada dalka Holland ku wareejisay waxa isaga iyo qoyskiisu noqday ka sideedaad ee ugu hantida badan dunida, sida warbixintu sheegtayna waxa qoyskaasi haystaa ilaa toban bilyan oo dollar.
Qoyska boqortooyada Qatar
Sheekh Xamad Bin Khaliifa Aala Taani iyo qoyskiisa ayaa kaalinta sagaalaad kaga jira liiskan, qoyska boqortooyada Qatar oo dalkoodu yahay kan ugu hodansan dunidu waxa hantidoodu tahay ilaa shan bilyan oo dollar ayay qosykani haystaan, wallow laga shaki qabo in ay saamiyo badan ku leeyihiin, shirkadaha iyo bangiyada ugu waaweyn dalkooda, sida shirkada Qatar Petroleum iyo Bank Qatar.
Suldaanka Brunei Hassanal Bolkiah
Dalka Brunei oo ka mid ah waddamada ugu qanisan dunida, isla markaana ah dalkii ugu horeeeyay dunida ee shidaal laga dhoofiyo, waxa ka taliya, Suldaan Hassanal Bolkiah, kaas oo wakhti dheer kaalinta koowaad kaga jiray, uguna hanti badnaa dunida, hasa yeeshee waxa hoos u dhac wayni ku yimi hantida qoyskaas, taas oo wakhtigan balaayiin dollar lagu qiyaaso.
Google Oo Ka Tallaabsatatay Shirkadda Apple Noqotayna Shirkadda Aduunka Ugu Qiimaha Badan Maxaad Ka Taqaan Faa’iidada Sabiibka Maxaad Ka Taqaan Lawska Walnut Iyo Caafimaadka Ku Jira Maxaad Ka Taqaan Waxtarka Iyo Khasaaraha Midhaha Flax seed (Qoondarka)?